Buuhoodle, Dec 04 2016--Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada Daljir oo xiiso gaar ah xambaarsan, waxaana maanta xarunta Idaacadda Daljir ee magaalada Buuhoodle kasoo jeedinaya Khadar Cawl. Xulashada Daljir waxaa idiin sahashay shirkadda GOLIS. Isgaarsiin waa Golis. Isgaarsiinta gayigeena. Adeeg casri ah yuu ku seegin adna ha seegin oo ha ka maqnaan baraha bulshada. GOLIS, isgaarsiinta gayigeena! GOLIS KU DOORO HAL ABUUR IYO HORUMAR JOOGTA AH!